Salaamanews » Safiirkii dowladda Serbia ee NATO oo si fool xun u dhintay
Home » Warar Safiirkii dowladda Serbia ee NATO oo si fool xun u dhintay Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 5th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Wariye Muqdisho lagu dilayMuqdisho ma mudantahay marti galinta doorashada?Ururada Dhalinyarada G/Galgaduud oo bulshada Gobolkaasi ku wacyigelinaya nabadda iyo horumarkaAl-shabaab oo beeniyay inay ka baxeen KismaayoMidowga Africa oo ka xun qaraxyada ka dhaca Muqdisho
(Salaamanews)-Safiirka dowladda Serbia ee NATO ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay magaalada Baraasles ee wadankaasi Biljamka.
Warbaahinta ayaa baahisay in uu shil ku dhintay safiirkii dowladda Serbia ee golaha gaashaanbuurta NATO asigoo ka soo degay garoonka magaalada caasimadda u ah biljamka kadib cariiri xoogan oo uu kala kulmay wadada.
Wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Serbia ayaa xaqiijisay geerida safiirka, Branislav Milinkovic, oo 52-sano jir ahaa waloow aan la heyn faahfaahin intaasi ka badan.
Warbaahinta ayaa soo tabineysa in saraakiisha dowladda Biljamka ay sameynayaan dadaallo ay kaga jawaabayaan shaki ka imaan karo in masuuliyad ay ku leeyihiin shilka gaadiid ee uu ku dhintay safiirka.
Ka hor geeridiisa ayuu Mr Branislav Milinkovic, ku raja weynaa inuu ka qeyb galo kulan ay iskugu imaan lahaayeen wasiirrada arrimaha dibadda midowga yurub.
Dowladda Serbia xubin kama aha dowladaha kulankaasi lagu casuumay ee doodda yeelanaya laakiin goob joog ayay ka noqon laheyd doodda wadamadu ay yeelanayaan oo u badneyd arrimaha dhaqaalaha.
Waaxda adeegga deg dega ah ee dalka Serbia ayaa sheegtay in dadaal ay sameyen kadib ay ku guuleysteen inay caawiyaan safiirka laakiin uu geeriyooday.
Xoghayaha guud ee gaashaanbuurta NATO General Anders Fogh Rasmussen, ayaa yiri “Ambassador Branislav Milinkovic, wuxuu ahaa masuul sare oo ku casuumnaay kulanka”.
Tags: warar « Qoraalkii HorePuntland oo si kulul kaga hadashay dagaal ka dhacay gobolka Bari	Qoraalka Xiga »Xukuumadda Roma oo xukun adag ku ridday burcad badeed Soomaali ah	Halkan Hoose ku Jawaab